Xog iyo Gorfeyn:- Sirta ka dambeeysa kulankii shalay dhexmaray Xasan Sheekh iyo C/raxmaan Faroole – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xog iyo Gorfeyn:- Sirta ka dambeeysa kulankii shalay dhexmaray Xasan Sheekh iyo C/raxmaan Faroole
Waxaa maalintii shalay kulan aan caadi ahayn xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku dhex yeeshay madaxweynaha xilka kasii degaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Faroole.
Kulankooda ayaa ahaa mid saxaafaddu dibad-joog ka ahayd, waxaana markii uu kulanka soo dhamaaday kadib ay si wadajir ah ula hadleen saxaafadda, iyagoona sheegay inay ka wada-hadleen arrimaha doorashada, balse ma jirin wax faah-faahin ah intaasi dheer oo ay bixiyeen.
Labadaasi mas’uul oo haatan ka mid ah musharixiinta sanadkaan ku tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegayaa in kulankooda uu sidoo kale ahaa mid ay isugu soo dhawaanayeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa uga mahad-celiyay C/raxmaan Faroole kaalintii uu ku lahaa in laga gudbo xilligii KMG, halka C/raxmaan Faroole uu sheegay in laga soo gudbay xilligii dhaliilaha la jeedin jiray islamarkaana haatan loo diyaar garoobayo doorashada.
C/raxmaan Faroole ayaa isna u mahad celiyay Xasan Sheekh Maxamuud waxqabadkii 4-tii sano ee lasoo dhaafay, wuxuuna u ballan qaaday in labada dhinac ay iska kaashan doonaan wax kasta oo maslaxad u ah dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, warar lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu C/raxmaan Faroole kusoo hadal qaaday in isbaheysi doorasho ay sameeystaan, taas oo meesha ka saari doonto heshiiskii uu C/raxmaan Faroole hore ula galay musharaxa kale ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
C/raxmaan Faroole ayaa rajo ka qaba in hadii uu Xasan Sheekh ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya uu saameeyn ku yeesho soo xullista ra’iisul wasaaraha ay yeelan doonaan beesha Daarood.
Ilo xog-ogaal ah ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijisay in C/raxmaan Faroole uu kasoo horjeedo siyaasi kasoo jeeda beeshiisa gaar ahaan Cumar C/rashiid iyo Maxamed C/laahi Farmaajo in midkood uu xil ka qabto dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, saacadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho si xowli ah u socda kulamada iyo gor-gortanka awood qeybsiga ay wadaan dadka u ololeynaya musharixiinta kala duwan, waxaana dhici karta ka hor doorashada madaxweynaha inay tanaasul sameeyaan musharixiin kale oo aad u badan.